Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yesibili) – iAfrika
Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yesibili)
*Isexwayiso: Okubalulwa ngezansi yilokho abanye babantu basemandulo ababezikhethela khona njengendlela yokuphila. Okuningi kwako sekuguquke futhi sekubhekwa ngamanye amehlo namuhla futhi kwamukeleka ngendlela ehlukile kunaleyo yasemandulo. Konke okwethulwa kule sizindalwazi kudaliwe ngabantu nje futhi akuqinisekisiwe. Isebenzise le mininingwane ngokwazi ukuthi kungase kube khona ubungozi kuyo. Asikho isiqinisekiso sokuthi konke okukhona kule sizindalwazi kuqinisile nokuthi imiphumela yokusetshenziswa kwako iyoba njani. Imininingwane emayelana nemisebenzi yezimila, amakhambi, imithi nokunye ayihlosiwe ukuba yiseluleko sezempilo.
La magama emithi alandelayo ngawezihlahla ezisetshenziswa ukwenza izimbiza, izintelezi kanye nobulawu.
Inhlokoshiyane – Lo muthi ngowokwelapha noma ukuqeda izinduna ebusweni, yingakho nje usetshenziswa yintsha. Kusetshenziswa amaqabunga kanye nezingxabo zakhona, kuphalazwa kuphinde kugqunywe ngayo inhlokoshiyane ukuze iqede izinduna ebusweni.
Ubhubhubhu – Lobu wubulawu obunamandla, kuphalazwa ngabo.
Uqhume – Lobu wubulawu obenza umzimba ubelula, uklase.
Uvuma – Lobu bulawu obumhlophe busetshenziswa yizinsizwa noma ngamabhungu ashelayo, lesi sihlahla kusetshenziswa amagxolo aso.
Isikhwali – Isikhwali nguvuma obomvu, osetshenziswa ngabadala nabancane.
Ungqengendlela – Lobu bulawu kugadla ngabo izinsizwa eziqomisayo noma ezishelayo. Lobu bulawu izinsizwa zikholelwa ukuthi bunewozawoza ezintombini. Lobu bulawu buyasatshenziswa nokususa izinduna, kukhanywa amanzi abo aconsiselwe emakhaleni.
Intalibombo – Le ntelezi inamandla kakhulu, imila endaweni esehlanzeni ibe luhlaza. Le ntelezi iyatshalwa nasekhaya kepha akufanele ibe sendaweni lapho okuhamba khona ozithwele ngoba angaphuphunyelwa yisisu, le ntelezi eyesithunzi.
Umaguqu – Lo muthi ukhipha izindenda, utholakala emihosheni yasenkangala. Kusetshenziswa izingxabo zawo kuphalazwe ngazo kanti futhi welapha isifuba.
Imbozisi – Imbozisi intelezi enamandla, isetshenziswa ukukhipha idliso kumuntu odlisiwe kanti futhi nensizwa iyayisebenzisa uma igadlwa ngezinye izinsizwa ukubolisa ubulawu bazo.
Usehlulamanye – Lo muthi yintelezi enamandla ehlula amanye amakhubalo ngamandla, yingakho ubizwa ngokuthi ngusehlulamanye. Le ntelezi kuthathwa amagxolo ayo kuphalazwe kuphinde kugqunywe ngawo ukuze kuqedwe isichitho, uphinde usetshenziswe ngabanumzane ngoba ubenzela isithunzi.
Umgxamu – Umgxamu ngumuthi obomvu omila ehlanzeni. Lo muthi uyintelezi yesithunzi okuchelwa ngayo, kuphalazwe ngayo futhi kugqunywe ngayo.
Tags Izimbiza, Izintelezi, Ubulawu